Ụgbọ elu ọhụrụ si Ontario na Austin na ụgbọ elu Southwest
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ọhụrụ si Ontario na Austin na ụgbọ elu Southwest
Nkwuputa maka ụgbọ elu Southwest ọhụrụ na -abịa ka ONT na -aga n'ihu na -enwe nnukwu mgbake ọrịa. N'August, ONT kọrọ na okporo ụzọ ndị njem dị n'ime 7% nke ọkwa pre-COVID.
Ụgbọ elu Southwest na -ekwupụta ụgbọ elu ọhụrụ site na Ọdụ ụgbọ elu mba ofesi Ontario gaa Austin, Texas.
Ndị ụgbọ elu Southwest ga -enye ụgbọ elu Ontario, California na Austin, Texas kwa ụbọchị malite na Machị 10, 2022.
Ọkwa Southwest bụ akụkọ anabatara maka ọnụ ụzọ ndịda Southern California na Alaeze Ukwu Inland.
Nkwupụta sitere na Southwest Airlines na ụgbọ elu dị ọnụ ala ga-efe efe kwa ụbọchị n'ọdụ ụgbọ elu Ontario (ONT) gaa Austin (AUS) malite na Machị 2022 bụ ozi nnabata maka ọnụ ụzọ ndịda Southern California na Alaeze Ukwu Inland.
Southwest Airlines ga -enye ụgbọ elu n'etiti NDỊ na Ọdụ ụgbọ elu mba ofesi Austin-Bergstrom kwa ụbọchị n'usoro oge a ga-amalite na Machị 10, 2022.
Flt # Mmalite Ebe Mbula Mbata Frequency Aircraft
1204 NDỊ aus 10: 55 am 3: 35 pm Mọnde - Fraị &
474 NDỊ aus 9: 50 am 2: 30 pm Nọdụ 737-700
1739 aus NDỊ 4: 35 pm 5: 55 pm Mọnde - Fraị &
257 aus NDỊ 2: 55 pm 4: 10 pm Nọdụ 737-700
Ụgbọ elu ọhụrụ ndị a dị maka ntinye akwụkwọ ozugbo
Alan D. Wapner, Onye isi oche nke Kọmitii Kọmitii OIAA kwuru, "Mgbakwunye nke isi obodo steeti Texas na maapụ okporo ụzọ anyị bụ ozi ọma na ngosipụta ntụkwasị obi nke nnukwu ụgbọ elu ONT." "Ọ bụkwa akara ọzọ na mgbake ONT site na oria ojoo COVID-19 na-aga nke ọma ma na-enwetakwa ike."
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Ontario (ONT) bụ ọdụ ụgbọ elu na -eto ngwa ngwa na United States, dị ka Global Traveler si kwuo, akwụkwọ na -ewu ewu maka ndị na -ebubata ọkụ mgbe niile. Emi odude ke Obio Ukara Inland, ONT edi n̄kpọ nte kilomita 35 ke edem usiahautịn Los Angeles ke ufọt Southern California. Ọ bụ ọdụ ụgbọ elu zuru oke nke, tupu oria ojoo nke coronavirus, nyere ọdụ ụgbọ elu azụmahịa na-akwụsịghị akwụsị na ọdụ ụgbọ elu 26 dị na US, Mexico na Taiwan.
Southwest ụgbọ elu Co., nke a na-akpọkarị Southwest, bụ otu n'ime ụgbọ elu kacha elu nke United States na ụgbọ elu ụgbọelu kacha ọnụ ala n'ụwa. Isi ụlọ ọrụ ya dị na Dallas, Texas ma haziela ọrụ maka ebe 121 na United States na mba iri ọzọ.